China Customized Design Full loko volamena Foil Beauty Paper Box Perfume Box Manufacture and Factory |SIUMAI
Famolavolana namboarina feno loko volamena Foil Beauty Paper Box Box Perfume Box
Inona no maha-zava-dehibe ny fonosana amin'ny menaka manitra?Amin'ny fomba fijery azo ampiharina, ny fonosana dia tompon'andraikitra amin'ny fitondrana ny sain'ny mpanao manitra sy ny hanitra mivondrona, ary ny fandefasana azy ireo manerana izao tontolo izao;eo amin'ny sehatry ny varotra, ny fonosana ihany koa dia mitondra ny andraikitry ny fifandraisana amin'ny mpanjifa.
Ny endriny, ny fitaovana ary ny haben'ny fonosana dia samy mampita hafatra samihafa amin'ny mpanjifa.Amin'ireo singa isan-karazany izay hita amin'ny maso mitanjaka dia zava-dehibe indrindra ny "loko".Ny loko dia afaka manome fikambanana maro ny olona.Ohatra, rehefa mahita mavo ianao dia hieritreritra voankazo toy ny akondro, voasarimakirana, ary manga;rehefa mahita manga ianao dia hiseho ny sary toy ny ranomasina sy ny lanitra;rehefa mahita mena ianao dia hieritreritra sary toy ny raozy na lelafo.Ny loko dia manome antsika fahatsapana samihafa.Amin'izay fotoana izay ihany koa dia manampy asa tanana samihafa izahay amin'ny alàlan'ny fanontana, toy ny hanitry ny ditin-kazo manitra mba hahatonga ny fonosana manontolo feno sosona.
1. Fonosana tsirairay: kitapo poly/shrink wrapping/rano porofo taratasy;Ampidiro na zarao ny fiarovana;
2. Best K = K fanondranana corrugated baoritra misy sarimihetsika wrapping;
3. Fonosana pallet plastika mafy miaraka amin'ny famonosana sarimihetsika sy fehikibo fonosana;
4. Fiarovana kitapo Dunnage ho an'ny fonosana famenoana;
5. marika fandefasana feno;
6. Tsy mihoatra ny 21kg isaky ny baoritra ho an'ny iraka;
7. Ekena ny fonosana manokana.
MOQ Raha ny mahazatra 1000pcs, fitsarana baiko amin'ny 500pcs dia azo ekena
01 Optimize ny fitaovana
Ny taratasy marika dia ampiasaina, tsy misy zorony manapaka, ny fitaovana rehetra dia azo amboarina malalaka sy mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, loko marevaka sy mazava ary madio.
02 HD fanontana
Masinina fanontam-pirinty Komori nafarana, ranomainty manara-maso ny tontolo iainana avo lenta miaraka amin'ny lamina mazava, manatsara ny faharetan'ny sary, ary ny mpiasa za-draharaha dia manana antoka avo roa heny amin'ny kalitao sy ny fahombiazany.
03 Asa tsara
Ny endriky ny vokatra dia malama sy fisaka, ny sisiny sy ny zorony dia voatsabo tanteraka, ary ny vokatra dia vita amin'ny viscose matanjaka.Karakarao amim-pahakingana ny vokatra ary ataovy amim-pitandremana.
04 Asa tanana isan-karazany
Hot stamping / UV / embossing sy ny dingana hafa dia afaka mahafeno ny filana samihafa.Karazana endrika sy fepetra voafaritra, vokatra namboarina ho anao.
Ny fonosana SIUMAI dia mifantoka amin'ny fanomezana fonosana avo lenta.Nifantoka tamin'ny fanontam-pirinty antonony ka hatramin'ny avo lenta izahay nandritra ny 20 taona.
Amin'ny ankapobeny, ny fonosana baoritra dia mampiasa ny endriny tsara tarehy sy ny asa tanana avo lenta mba hanampiana amin'ny fanatsarana ny vokatra sy hanatsarana ny fifaninanana amin'ny vokatra.Raha jerena ny fiasa sy ny toetran'ny vokatra, ny famolavolana fonosana dia nandray anjara tsara tamin'ny dokam-barotra maimaim-poana.
Ny mpanjifa ihany no mila manome drafi-pamokarana vokatra na famolavolana sy fampahalalana momba ny fepetra takiana amin'ny fanamboarana.Handamina mpamorona matihanina izahay hanampy ny mpanjifa hamorona fonosana manokana.
Famaritana ny boaty fonosana
Manome serivisy namboarina.Ny habe rehetra, ny karazana boaty, ny asa tanana, sns.
Azo atao, toy ny baoritra fotsy, mifono taratasy, taratasy kraft, corrugated taratasy, aluminium foil taratasy, taratasy manokana, sns.
Fonosana fanomezana, fonosana kilalao, fonosana kosmetika, fonosana sakafo, fonosana mitondra, fonosana ara-pitsaboana, kiraro sy akanjo, fonosana vokatra fitsaboana, sns.
Satria ny vokatra vita amin'ny taratasy dia vokatra namboarina, dia azo amboarina araka ny fepetra takinao izy ireo (famaritana taratasy, grama taratasy, karazana taratasy, habe, famolavolana, fanontana, sns.).Noho ny anton-javatra toy ny fepetra arahana, ny fitaovana, ny famolavolana ary ny teknolojia fanodinana, ny vidiny dia tsy mitovy, ary ny teny nalaina dia miankina amin'ny fepetra manokana.
Manontania azafady: Raha manana santionany ianao dia azonao atao ny manamboatra azy ireo.Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay mpiasan'ny varotra, mandray ny fanontaniana rehetra izahay!
teo aloha: SIUMAI Boaty fandefasana entana vita amin'ny zipper boaty baoritra
Manaraka: Boaty CD taratasy firaketana an-tsoratra sarona taratasy CD DVD VCD rakotra sarona